Nọmba ndị Japan sitere na 1 ruo 50 na ịkpọpụta ha - UniProyecta
Nọmba ndị Japan sitere na 1 ruo 50
Japanese bụ otu n'ime asụsụ nwere ike gbagwojuru anya nye ndị mmadụ. Dị ka ọ dị n'asụsụ ndị ọzọ, ịkwesịrị ịdị na -agbanwe agbanwe ma na -eme ya kwa izu. Ọ dabara nke ọma, nọmba na japan Ha dị mfe mmụta, yabụ ọ bụ ebe dị mma ịmalite ịmụ asụsụ a.
Ịmụ ọnụ ọgụgụ asụsụ ọ bụla bụ ụzọ dị mma ịmalite na ịmalite ịmụ ihe ndị bụ isi. Ihe dị ịtụnanya gbasara ọnụọgụ na Japanese bụ nke ahụ ọ ga -ekwe omume ịgụta 999 site na iji naanị mkpụrụokwu 11, n'agbanyeghị na ọ dị mkpa ịmụta iwu nke ọnụọgụ iji okwu 11 ahụ nke ọma.
Nke a bụ n'ihi na n'asụsụ Japanese ọnụọgụ anaghị apụta dị ka n'asụsụ Spanish na asụsụ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ, ịsị 'narị nde' n'asụsụ Spanish ọ dị mkpa ijikọ efu efu 100,000,000; Mgbe ọ nọ na A na -ejikọta zeros ndị Japan na anọ, yabụ anyị ga -ahụ 1 0000 0000.
Ka ị nwee ike mụta ọnụọgụ na Japanese, n'okpuru, anyị ga -eweta usoro ndụmọdụ ga -enyere gị aka nke ukwuu.
0.1 Ọdịiche dị n'etiti ọnụọgụ Japanese na nọmba China
1 Mụta nọmba Japanese site na 0 ruo 9
Ọdịiche dị n'etiti ọnụọgụ Japanese na nọmba China
Ihe kpatara o ji dị mkpa iburu n'uche ọdịiche na myirịta dị n'etiti ọnụọgụ ndị Japan na China bụ n'ihi na ọnụọgụgụ na Japan sitere n'ụdị China. N'ụzọ dị otu a, ọ ga -ekwe omume ịhụ nke ahụ Mkpụrụedemede ndị China (sinogram) na kajis Japanese maka nọmba. Naanị ihe dị iche bụ na ụzọ agụta.
Dịka ọmụmaatụ, na sinogram ndị China na kajis Japanese, 1 họpụtara 100. Mana na ọnụọgụ ndị ọzọ, anyị na -ahụ ụfọdụ ọdịiche, dị ka nọmba 1,000, na Japan na -eji Kaji 百 na China ọ na -eji 一百; ha abụọ pụtara 'otu ugboro otu narị'. Otu ihe ahụ na -eme na ọnụọgụ XNUMX, nke bụ 千 na Japanese na 一千 na Chinese.
A na -ahụ otu ọdịiche a na ọnụọgụ dị ka 600 ma ọ bụ 2000 ma na -egosi na n'asụsụ Chinese 1 gụnyere itinye aka na iri, narị ma ọ bụ puku, ebe na Japanese, agbakwunyeghị ya.
Mụta nọmba Japanese site na 0 ruo 9
N'asụsụ ọ bụla, ihe mbụ ị ga -eme iji mụta ịgụta bụ ịmụta ọnụọgụ site na 0 ruo 9. Nke a bụ n'ihi na ọnụọgụ ndị a bụ ntọala nke ọnụọgụ niile anyị nwere ike ịhụ.
N'echiche a, ọnụọgụ ndị Japan na -arụ otu ọrụ: ha na -emebi. Iji nye gị echiche ka mma, n'okpuru a, m ga -ekerịta tebụl ebe ị nwere ike ịhụ ọnụọgụgụ, kanji, hiragana, ntụgharị romaji na mkpọpụta okwu.
Nọmba kanji Hiragana Ndianyi Mkpọpụta okwu
0 零 Zero rei rei
1 一 ち // い い Ichi / itsu Ichi / itsu
2 Abụọ に ni Mba
3 ato Maazị san Eziokwu
4 anọ し // よ よ shi / yon shi / yon
5 Nri Nke gi go go
6 isii く roku roku
7 Asaa ち // な な shichi / nana shichi / nana
8 Asatọ Bee nkechi nkechi
9 iteghete ゅ う // く kyü / ku kyu / ku
Ị̀ buworị isi ma mee tebụl? Ịmụta eserese a bụ nnukwu ụzọ ịmalite ịmụ asụsụ Japanese. Anyị na -akwado ka ịmalite site n'ịkpọpụta okwu na akụkụ ọnụ tupu ị kpebie ịmụ kanji na kana.
N'ime okpokoro dị n'elu, ị nweela ntọala niile ịchọrọ, mana enwere nọmba ụfọdụ achọrọ ikwu maka ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya. Iji nọmba ndị Japan sitere na tebụl dị n'elu anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụ dị elu ugbu a. N'iji tebụl na -esote, ị nwere ike gụọ ọnụọgụ niile ịchọrọ.
10 iri iri abụọ jü ji
20 iri abụọ Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị niju niju
30 iri ato Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị sanju sanju
100 百 ゃ anya anya
1000 千 ん sen sen
1 0000 (puku iri) iri puku ん nwoke nwoke
10 0000 (otu narị puku) Otu narị puku Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị nwoke nwoke-nwoke
100 0000 (otu nde) Mmmmmmmmmm Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị hyakuman hyakuman
1000 0000 (nde iri Nde iri Achọpụtara m na enwere m mmasị na ya onye isi onye isi
1 0000 0000 (otu narị nde) 億 く gụọ gụọ
Dị ka ị na -ahụ na tebụl dị n'elu, ọ bụ n'ezie ihe dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, naanị tinye nọmba 2 na 10: ugboro abụọ iri. N'ụzọ dị otu a, anyị na -ahụ ihe abụọ mgbe anyị na -ede kanji na na hiragana, mana otu ahụ na -eme na romaji. Iji mee nke a, ekwesịrị idobe 2 ahụ n'ihu 10.
A na -ahazi ọnụọgụ ndị ahụ na Japanese n'ụzọ dị iche karịa ndị anyị na -asụ Spanish mara: a na -eji otu anọ kama otu atọ. Nke a bụ nkọwa dị nfe nke nwere ike bute ọgbaghara naanị n'ihi agwa anyị nwere na ọnụọgụ, ebe anyị kewara ha ụzọ atọ ebe anyị dị obere. N'ikpeazụ, ka ị ghara ịdị na -ele anya oge niile ka ọnụọgụ dị, anyị na -ahapụrụ gị ihe onyonyo ị nwere ike ibudata ma na -eburu gị mgbe niile na ekwentị gị.
Ka ọ dị ugbu a, ihe niile dị nfe, na agbanyeghị na ọ naghị agbagwoju anya karịa, enwere ụfọdụ ewezuga nke ị ga -amụta ka ị nwee ike iji ọnụọgụ ahụ nke ọma.
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ewezuga nwere mgbagha anyị nwere ike ịghọta, ọbụlagodi na anyị amaghị asụsụ ahụ ntakịrị.
Ihe atụ nke ewezuga:
Iji kwuo 300, ekwuru ya sanhyaku, ma ọ bụrụ na ọ bụghị sanbkyaku (三百 na kanji na さ んびく na hiragana).
Ikwu 600 (六百), ị sị ropyaku ろぴゃ く) kama rokuhyaku.
Iji kwuo 800 (八百), ị kwuru obi ụtọ はぴゃ く) kama hachihyaku.
Ikwu 3000 (三千), ị sị san sen sino senti zen さぜ).
Ikwu 8000 (八千), ị sị hassna.
Iji mechaa, anyị akwadebere gị vidiyo a ka ị nwee ike ịnụ mkpọpụta nke ọnụọgụ ndị ahụ, site na 1 ruo 1000.
Mara mma dị mfe nri? Ebe a ị nwere ọtụtụ ozi ga -aba uru ịmalite mmụta.
Categories Asụsụ, Japanese Igodo bọtịnụ
Nọmba Ịtali sitere na 1 ruo 100
Nọmba Guarani sitere na 1 ruo 100
Inicio » Asụsụ » Japanese » Nọmba ndị Japan sitere na 1 ruo 50
Nọmba Mayan sitere na 1 ruo 1000
6 kwuru na "Nọmba ndị Japan sitere na 1 ruo 50"
Disemba 9, 2018 na 11:54 pm
Nkà ihe ọmụma pụtara na Japanese nke "ni"; "Gaba"; "Ju".
Disemba 21, 2018 na 11:14 pm
Ọ dị mma, daalụ nke ukwuu
Abụọ 6, 2019 na 4:45 pm
Ịkpọpụta ya ziri ezi, enwere m mmasị n'ịmụ asụsụ Japanese m na -amalitela
Mee 1, 2019 na 2:58 am
Ihe atụ dị oke egwu, ikekwe ha nwere ike duzie m ebe ha na -enye nkuzi Japanese
June 8, 2019 na 2:14 pm
ọ jeere m ozi, daalụ nke ukwuu!
ugbu a…. onwere onye? : v
Ama m na enwere ihe karịrị otu otaku ebe a>: U
August 5, 2019 na 2:03 am
O jere m ozi nke ukwuu.